Kungcono iidola okanye ii-cryptocurrensets? | Iindaba zeGajethi
Kungcono iidola okanye ii-cryptocurrensets?
Iikristali Kudala beyishiyile i-niche yokufuna ukwazi ukuba, ngokwabo, Inxalenye ebalulekileyo yoqoqosho lwehlabathi kwiinkalo ezahlukeneyo. Ayizukujongwa kuphela kumhlaba wokonga okanye wentelekelelo, kodwa zizinto zexabiso ezibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo kwinto ebalulekileyo njenge yorhwebo ngaphandleNgaphambili, yayikukugcinwa okukhethekileyo kwemali yase-US.
1 Izinto eziluncedo ze-imali yedatha njengendlela yokuhlawula kurhwebo lwangaphandle
2 Iidijithali zemali zitya umhlaba kwidola
3 Ukurhweba ngeDijithali yemali
Izinto eziluncedo ze-imali yedatha njengendlela yokuhlawula kurhwebo lwangaphandle
Enye yeenzuzo esiza kuthi siziphawule kakhulu ezipokothweni kukuba ukuhanjiswa kwemali ye-imali yedatha ineekomishini eziphantsi kakhulu, okanye ayinayo ikhomishini kwimeko yeecryptos ezithile. Kungenxa yokuba ukwenza intengiselwano esiyenzayo ngaphandle kweebhanki, kuba asifuni namnye umlamli. Isixa semali esingathathekiyo, kuba ikhomishini yamaqumrhu ahlala ehlawulisa xa kusenziwa uhambiso lwamanye amazwe iphezulu kakhulu.
Kukho iingcali ezixela kwangaphambili ukuba kwixesha elizayo siza kuba nakho ukuhlawula ngokuthe ngqo nge-e-Wallet yethu (isipaji sombane apho abasebenzisi bee-cryptocurrensets bazigcina khona) endaweni yokusebenzisa amakhadi etyala akudala. Ukubona indlela i-cryptocurrensets ezifumana ngayo ngokukhawuleza izikhundla, asinakuthi ziingcinga ezinomdla, kodwa umbono wekamva elikufutshane kunye neenketho zokuba ziyinyani.
Iidijithali zemali zitya umhlaba kwidola
Nangona ineentloni ngandlela ithile, kuyacaca ukuba imali etyalwe kwii-cryptocurrensets endaweni ethile iyanqunyanyiswa, kwaye nangona intengiso ye-forex isekude, yeyona ntengiso inkulu emhlabeni, Yintoni ukuthengisa nge-imali yedatha sele ihamba malunga ne-400.000 yezigidigidi zeedola kwaye iyaqhubeka nokukhula ngokucacileyo (akufuneki silibale ukuba kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ii-cryptocurrensets zazingekho ngaphandle kwengqondo yomfundi othile wethiyori).
Kananjalo emva kokuwa okungapheziyo ngo-2018, kufuneka sibonise unyaka olungileyo ka-2019 wokuba ii-cryptocurrensets zinazo ngokubanzi, ziqaqambisa i-bitcoin, ethi, nangona ivulekileyo ngo-2019 ingezantsi kwe- $ 4.000, yafikelela, xa sasichukumisa i-ikhweyitha yalo nyaka, i $ 13.000. Nangona kunjalo, ngaphezulu koko kwaxelwa kwangaphambili ngabachasi bayo, uninzi lwabo olungakhange lubone kwi-bitcoin ngaphezulu kwebhabhalaza lezoqoqosho elingenabuntu. Zonke ezinye iinkampani ezinkulu, nangona zingaphezulu kwexabiso ebenazo ngoJanuwari, aziqhubi kakuhle kwisiqingatha sesibini sonyaka ukuza kuthi ga ngoku.
Ukurhweba ngeDijithali yemali
Ukuqala, siza kuthi akufuneki sibhidanise urhwebo ngezivumelwano zoMmahluko (CFD Isichazi sayo kwi-English) kunye ne-cryptocurrensets, ngokurhweba nge-CFD nge-forex okanye ngentengiso ye-forex uqobo, olutshintshiselwano lwemali ekufuneka lwenziwe, umzekelo, yinkampani enkulu esebenza kumazwe amaninzi, ngokuhambelana nayo iimali zesizwe.
Kwi-forex, abantu benza okanye balahlekelwe yimali ekusebenzeni kwe-forex, kuba ixabiso labo lihlala litshintsha, ke eyona nto ilungileyo kukuyithenga imali siyithengise, okanye siyitshintshe, xa yomelele, njengoko besinokwenza ngayo nayiphi na enye iasethi eyimali .
Kodwa ukuthengisa nge-CFDs nge-cryptocurrensets, i-currencies (i-forex) okanye izixhobo zendalo, kunzima kakhulu kwaye kunezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga, esiza kuthi siphawule ngazo.
Okokuqala, sisebenza ngombane, Oko kuthetha ukuba ukuba ngokomzekelo sithenga ii-CFD ze-asethi ngeedola ezili-1.000 kunye nepesenti yesiqinisekiso semali eyi-10%, ukuvula isikhundla kuya kufuneka sifake iidola ezili-100 kuphela, kodwa ukuba ixabiso leasethi lisichasele I-20% yethu iya kulahla i-200 yeedola, iphindwe kabini imali ebekiweyo, kwaye ngokuchaseneyo, ke ngoko, sinqwenela ukuphumelela, okanye ukubeka emngciphekweni wokuphulukana nemali engaphezulu kunaleyo sinokuyifumana kutyalo-mali lwethu kuphela.
Kungenxa yokuba xa uvula isikhundla somthengisi usigubungela "ngemboleko". Ngokucacileyo ukuba sibeka emngciphekweni imali singaphulukana nayo, kwaye ukuphulukana nemali "abayiboleke" kuthetha oko Siya kuba sifumene amatyala, ukongeza ekulahlekelweni yimali ebityaliwe.
Ngesi sizathu, kubaluleke kakhulu ngaphambi kokuqalisa kolu hlobo lomsebenzi ukuqinisekisa ukuba idiphozithi esiyenzayo sinako ukuhlawula (ukhetho lokuqokelela iilahleko luphezulu kakhulu) kwaye oko sinamava abanzi otyalo mali kwiimarike eziphezulu zokungazinzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » Kungcono iidola okanye ii-cryptocurrensets?
Isithethi sebhetri le-Sonos ngoku siyathengiswa: Sonos Move
Ukuphonononga uSomlomo weSistim saMandla 7